Izici - I-Next Supply Chain
I-Nextschain ingesinye sezixazululo ezinhle kakhulu ze-e-commerce zokukhulisa ibhizinisi lakho lomhlaba wonke eliwa phansi.
01 / Izinkulungwane Zemikhiqizo Ewinile
Ukuwina imikhiqizo kuyisihluthulelo sokuqhuba isitolo se-inthanethi esiphumelelayo.Yeka ukumosha imali ngemikhiqizo emibi, i-NextsChain iqashe uchwepheshe ukuthi anikeze Izinkulungwane zemikhiqizo ewinayo ukusiza abathengisi be-shopify ukwenza ukuthengisa kube lula.
02 / Ukuthunyelwa Kwemikhumbi Emhlabeni Wonke
I-NextsChain isebenzisana nabathwali bomhlaba abangu-300+ ukukulethela izinketho eziningi zokuthumela ezithengekayo nezithembekile zokuthunyelwa komhlaba wonke.Ngokusekelwe kusistimu yethu ehlakaniphile singakugwema kalula ukuvinjwa ngezikhathi ezimatasa njengoKhisimusi noLwesihlanu Omnyama, okwamanje sihlinzeka ngokulandela ukuthunyelwa.
03 / Gcwalisa Ama-oda Ngobuningi
Ungagcwalisa ama-oda akho ansuku zonke ngobuningi ngokuchofoza okumbalwa esikhundleni sokukodwa ngakunye, sizopakisha futhi sithumele imikhiqizo ngqo kumakhasimende akho.
04 / I-Auto Inventory kanye ne-Price Daily update
Ihlola amaleveli esitoko nsuku zonke futhi igcine amaleveli esitoko esesikhathini samanje futhi isebenzisa imithetho yentengo ukuze ibuyekeze izintengo zento ngokuzenzakalelayo.
05 / Facebook Ads Target Nikeza
Izikhangiso ze-Facebook ingesinye seziteshi ezingcono kakhulu zokumaketha zokuqalisa ukuthengisa, futhi sinikeza okuqondiwe okunembile Kwezikhangiso ze-Facebook kuyo yonke imikhiqizo ewinile, ngenjongo nje yokusiza abathengisi bakwaShopify bakhulise ukuthengisa kwabo okungu-10X.
06 / Ukufaka uphawu ngokwezifiso nokupakisha
Wonke amaphakheji azothunyelwa ngaphansi kwegama lomkhiqizo wakho, futhi sinikeza ukupakisha okwenziwe ngendlela oyifisayo ukukusiza ukwakha umkhiqizo wakho.